Yuu noqon doonaan Agaasimaha guud ee Inter Milan? – Bandhiga
Yuu noqon doonaan Agaasimaha guud ee Inter Milan?
Beppe Marotta oo la filayo in dhawaan si rasmi ah loogu magacaabo agaasimaha guud ee Inter Milan ayaa doonaya inuu kooxdisii hore Juventus ku garaaco saxiixa Paul Pogba isagoo u mari doona hab ka farxin kara kooxda Manchester United.
Wargeyska laga leeyahay magaalada Turin ee Tuttosport ayaa banaanka soo dhigay in Marotta uu qorsheynayo dabin aan caadi aheyn oo uu waji gabax uga dhigi doono Bianconerri, wuxuuna Red Devils ku wareejin doonaa Milan Srkiniar iyo Ivan Perisic midkood.
Inkastoo aysan kooxda Inter Milan si rasmi ah u magacaabin Beppe Marotta hadana waxaa la filayaa inuu ka shaqeeyo qorshayaal waaweyn oo xiiso galin kara maamulka Nerazzurri.
Sida uu wargeyska qiray Marotta wuxuu doonayaa inuu heshiiska dib loogu soo celinayo Paul Pogba magaalada Turin afduubo, wuxuuna ka faa’ideysan doonaa xiisaha uu Mourinho u qabo Perisic iyo Skriniar.
Hadii Inter ay labadaas xiddig ka qeybgaliso heshiiska ay kula soo wareegeyso Paul Pogba waxey ka dhigan tahay in Bianconerri uu ku dhici karo waji gabaxii ugu weynaa mudooyinkii ugu dambeeyay ee dhanka suuqa kala iibsiga.
Xiddiga reer France dhawaan wuxuu saxaafadda la wadaagay in Juventus ay tahay sida gurigiisa oo kale, sidoo kale uu jaceyl fara badan u haayo kooxda iyo jamaahiirtaba.